Rasmiga rasmiga ah ee macOS High Sierra, Amazon Prime Video, AirPods sanadka 2018, iyo inbadan. Toddobaadka ugu fiican waxaan ka imid Mac | Waxaan ka socdaa mac
Haa, waxaan horeyba ugu jirnay bishii Diseembar ee sanadkan 2017 runtii waxaan dhihi karnaa in waxyaabo badan ay ka dheceen dunida Apple. Dhexdooda waxaan helnaa waxyaabo aad u wanaagsan iyo waxyaabo aad u xun, laakiin ugu dambeyntii tani waa wax iska caadi ah shirkad ka weyn sida Apple.
Laakiin maanta oo kale maalin kasta oo Axad ah waxaan diirada saari doonaa wararka ku saabsan Apple ee aan ku aragnay waxaan ka imid Mac, markaa isdeji oo si degan hada waad awoodaa akhri dhammaan waxyaabaha muhiimka ah inta lagu jiro toddobaadkan ee adduunka Mac iyo guud ahaan Apple.
Mana ku bilaabi karno warar kale oo aan ka aheyn bilaabista - macOS 10.13.2 nooca ugu dambeeya, kaas oo dhaca bil kadib markii la soo saaray beta-kii ugu horreeyay oo ay weheliso macruufka ugu dambeeya, watchOS iyo cusbooneysiinta tvOS dhammaan isticmaaleyaasha.
Wararka soo socda ayaa la xiriira imaatinka Amazon Prime Video on Apple TVs. Waana in cusbooneysiinta tvOS ay la timid arjiga jiilka saddexaad, afaraad iyo shanaad ee Apple TV-yada. Marka laga hadlayo qaabka duugga ah codsigu wuu muuqdaa isagoon waxba taaban haddii uusan muuqanna waa inaad ka saar barnaamijyada shaashadda guriga dejimaha.
Mid ka mid ah wararka ugu caansan ee aan ka imid Mac ayaa ka hadlaya iibka mustaqbalka ee Apple AirPods sanadka soo socda. Falanqeeyaha KGI Ming-Chi Kuo ayaa sidaas sheegay shixnadaha sanadka soo socda ee sameecadaha dhagaha waaweyn waxay jabin doontaa dhammaan diiwaanada ilaa maanta.
Ugu dambeyntiina waxaannu kaaga tagi doonnaa wararka ku saabsan waxqabadka RPG game Deus Ex: Bini-aadamka Waa la Qaybiyey, kaas oo gaari doona dadka isticmaala macOS maalinta Talaadada, Diseembar 12. Kani waa ciyaar cajiib ah oo ka iman doonta gacanta horumariye Isdhaxgalka Feral ee isticmaalayaasha Mac.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Rasmiga rasmiga ah ee macOS High Sierra, Amazon Prime Video, AirPods sanadka 2018, iyo inbadan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac